အက်သလက်တီကိုနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ကြား ပါတေး-ဂန်ဒူဇီ အလဲအထပ်အတွက် ဆွေးနွေးနေ - Arsenal Myanmar News
အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူ သောမတ်စ် ပါတေးအတွက် အာဆင်နယ်အသင်းဆီက ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကို ရရှိခဲ့တယ်လို့ စပိန်သတင်းရပ်ဝန်းက ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဂန်းနားလူငယ်ကစားသမား မက်တီယို ဂန်ဒူဇီ+ပေါင်သန်းအနည်းငယ်နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို စပိန်အသင်းဘက်က ပယ်ချခဲ့ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အသင်းကနေ ထွက်ခွာပြီး အာဆင်နယ်ဆီလာချင်နေတဲ့ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ်လူအတွက် ရရှိလာတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုက အက်သလက်တီကိုအတွက် မူအားဖြင့်တော့ သဘောတူညီချင်စရာဖြစ်ပြီး ကစားသမားတွေအတွက် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး သတ်မှတ်မှုမှာသာ ကွာခြားနေခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အာဆင်နယ်အသင်းဘက်က သူတို့ရဲ့ လူငယ်ကွင်းလယ်လူ ဂန်ဒူဇီကို ယူရိုသန်း ၄၀ ကနေ ၄၅ သန်းကြား သတ်မှတ်ထားခဲ့တာကို အက်သလက်တီကိုဘက်က လက်မခံနိုင်ဘဲဖြစ်နေပြီး ဒီပြင်သစ်ယူ-၂၁ ကစားသမားဟာ ယူရို ၂၅ သန်းကနေ သန်း ၃၀ ကြားသာ တန်လို့ ငွေကြေးပမာဏကို တိုးမြှင့်ပေးဖို့ အကြောင်းပြန်ကြားထားခဲ့ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့ အက်သလက်တီကိုတို့အနေနဲ့ ယူရိုသန်း ၅၀ တန်စာချုပ်လျော်ကြေးထည့်သွင်းထားတဲ့ ပါတေးအတွက် ဂန်ဒူဇီအပြင် ယူရိုသန်း ၂၀ ကျော် အလိုက်ပေးစေလိုနေတယ်လို့ဆိုနေကြပြီး ငွေကြေးစိစစ်သုံးစွဲရမယ့် အာဆင်နယ်အတွက်တော့ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကတော့ ရှေ့ဆက်နေဆဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အာဆင်နယ်ဘက်ကတော့ ကစားသမားအလဲအထပ်နဲ့ဆိုရင် ယူရို ၁၀ သန်းဝန်းကျင်သာ အသုံးပြုသွားနိုင်မယ့် အနေအထားလည်းရှိနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပြီး တီကိုဘက်က စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး အလက်ဇန်းဒါး လာကာဇက်ကိုပဲ ပြောင်းလဲအသုံးပြုမလား စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး အာတီတာရဲ့ ပထမဦးစားပေး ပစ်မှတ်အတွက်တော့ အရင်ထက်စာရင် ပိုမိုနီးစပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
REF: DAILY CANNON
UNICODE: အကျသလကျတီကိုမကျဒရဈကှငျးလယျလူ သောမတျဈ ပါတေးအတှကျ အာဆငျနယျအသငျးဆီက ကမျးလှမျးမှုတဈခုကို ရရှိခဲ့တယျလို့ စပိနျသတငျးရပျဝနျးက ဖျောပွခဲ့ပွီး ဂနျးနားလူငယျကစားသမား မကျတီယို ဂနျဒူဇီ+ပေါငျသနျးအနညျးငယျနဲ့ ကမျးလှမျးမှုကို စပိနျအသငျးဘကျက ပယျခခြဲ့ထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အသငျးကနေ ထှကျခှာပွီး အာဆငျနယျဆီလာခငျြနတေဲ့ အသကျ ၂၇ နှဈအရှယျ ကှငျးလယျလူအတှကျ ရရှိလာတဲ့ ကမျးလှမျးမှုက အကျသလကျတီကိုအတှကျ မူအားဖွငျ့တော့ သဘောတူညီခငျြစရာဖွဈပွီး ကစားသမားတှအေတှကျ ဈေးကှကျပေါကျဈေး သတျမှတျမှုမှာသာ ကှာခွားနခေဲ့တာလညျးဖွဈတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အာဆငျနယျအသငျးဘကျက သူတို့ရဲ့ လူငယျကှငျးလယျလူ ဂနျဒူဇီကို ယူရိုသနျး ၄၀ ကနေ ၄၅ သနျးကွား သတျမှတျထားခဲ့တာကို အကျသလကျတီကိုဘကျက လကျမခံနိုငျဘဲဖွဈနပွေီး ဒီပွငျသဈယူ-၂၁ ကစားသမားဟာ ယူရို ၂၅ သနျးကနေ သနျး ၃၀ ကွားသာ တနျလို့ ငှကွေေးပမာဏကို တိုးမွှငျ့ပေးဖို့ အကွောငျးပွနျကွားထားခဲ့ပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားခဲ့တဲ့ အကျသလကျတီကိုတို့အနနေဲ့ ယူရိုသနျး ၅၀ တနျစာခြုပျလြျောကွေးထညျ့သှငျးထားတဲ့ ပါတေးအတှကျ ဂနျဒူဇီအပွငျ ယူရိုသနျး ၂၀ ကြျော အလိုကျပေးစလေိုနတေယျလို့ဆိုနကွေပွီး ငှကွေေးစိစဈသုံးစှဲရမယျ့ အာဆငျနယျအတှကျတော့ စဉျးစားစရာဖွဈနခေဲ့ပမေယျ့ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးမှုတှကေတော့ ရှဆေ့ကျနဆေဲလို့ ဆိုပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အာဆငျနယျဘကျကတော့ ကစားသမားအလဲအထပျနဲ့ဆိုရငျ ယူရို ၁၀ သနျးဝနျးကငျြသာ အသုံးပွုသှားနိုငျမယျ့ အနအေထားလညျးရှိနတေယျလို့ ခနျ့မှနျးနကွေပွီး တီကိုဘကျက စိတျဝငျစားနတေဲ့ တိုကျစဈမှူး အလကျဇနျးဒါး လာကာဇကျကိုပဲ ပွောငျးလဲအသုံးပွုမလား စောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈပွီး အာတီတာရဲ့ ပထမဦးစားပေး ပဈမှတျအတှကျတော့ အရငျထကျစာရငျ ပိုမိုနီးစပျလာခဲ့ပွီဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
By AM Author| 2020-07-26T05:13:52+00:00	July 26th, 2020|News|Comments Off on အက်သလက်တီကိုနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ကြား ပါတေး-ဂန်ဒူဇီ အလဲအထပ်အတွက် ဆွေးနွေးနေ